I-Air Leth Bed and Breakfast, I-Cuillin Suite - I-Airbnb
I-Air Leth Bed and Breakfast, I-Cuillin Suite
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Angela
Ngokulandela impumelelo yendawo yethu yokuhlala ye-Air Leth Self Catering siye sanweba indawo yethu ukuze ihlanganise nendawo yokulala ye-deluxe eyengeziwe nesidlo sasekuseni, eklanywe ngesitayela samanje sisebenzisa izimiso ezenza zifinyeleleke ngokukhethekile kubantu abakhubazekile. Ifulethi laseCuillin libanzi kakhulu futhi lingasethwa libe nosayizi wenkosi imibhede emibili noma engamawele, nombhede kasofa owengeziwe. Iphinde ibe neshawa eguqulelwe ku-"en-suite" kanye nendlu yangasese. Futhi konke kusethwe endaweni enhle ye-Skye. ..
Igama elithi "Air Leth" empeleni igama lesiGaelic elisho "indawo eyingqayizivele, ekhethekile". Sakhe i-Air Leth njengendawo lapho wonke umuntu wamukelekile, ikakhulukazi abantu abakhubazekile. Lolu hlobo lwesikhala empeleni lulinganiselwe kakhulu e-Isle of Skye lapho iningi lokulala nebhulakufesi lingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezinjalo. Ukuzivumelanisa nezimo nokulungiswa kufakwe emakamelweni ethu anamuhla anesitayela futhi anefenisha enhle kakhulu, esicabanga ukuthi awanakuqhathaniswa namanani ethu. Uhlu olugcwele lwezinketho zasekuseni lunikezwa ngesikhathi osithandayo ekamelweni lakho.
4.96 out of 5 stars from 351 reviews
4.96 · 351 okushiwo abanye
I-Air leth itholakala ePortree, cishe imizuzu eyishumi ukusuka enkabeni. Ibukeka endaweni emangalisa ngempela, kuze kufike eCuillins eqhele ngamamayela ayisishiyagalolunye. Yindawo ethule futhi engenabo ubugebengu. Abantu baseSkye bajwayele ukuhlala endaweni ekude yase-Highland lapho asebethuthukise khona isiko lokuthi wonke umuntu uyakhathalelana.
I-Air leth iphethwe futhi iphethwe ngu-George no-Angie Baker bobabili ababeke baqashwa kwezempilo nezenhlalakahle. U-Angie ungowokuzalwa eSkye futhi uGeorge wathuthela lapha esuka eGlasgow cishe eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Sobabili siyajabula ukuzama ukusiza nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nezindawo ongaya kuzo nezinto ongazibona.
I-Air leth iphethwe futhi iphethwe ngu-George no-Angie Baker bobabili ababeke baqashwa kwezempilo nezenhlalakahle. U-Angie ungowokuzalwa eSkye futhi uGeorge wathuthela lapha esuka…